सम्झनामा महाकवि देवकोटा | News Polar
नरेन्द्रराज प्रसाई कार्तिक २९, २०७७, शनिबार
महाकवि देवकोटाको जीवनका महत्वपूर्ण घटनाहरु
काठमाडौं । नेपाली जनजनका मनमा बसेका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नेपाली साहित्यमा कुनै विशेषण नचाहिने नाम हो । महाकविका रुपमा नेपाली साहित्याकारमात्र नभएर नेपाली जनजनका मनमा श्रद्धापूर्वक रहेको नाम हो– लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा यस्तो नाम हो जसको नामैले पनि नेपाली साहित्यको शिर श्रद्धाले निहुरिन्छ, हर नेपालीको मन श्रद्धाले फुलेर ठूलो बन्छ । आज तिनै नेपाली जनका प्यारा साहित्यकारको जन्म दिन हो ।
जसले आफू के हो ठूलो जगतमा पसिना विवेक भनेर सारा नेपालीलाई परिश्रम र विवेक अर्थात ज्ञानका लागि सदैव उत्प्रेरित गरिरहे । सबै नेपालीलाई कुनै मेहनेत र परिश्रम गर्न उनले आफ्ना सिर्जनामार्फत प्रेरित गरिरहे । देवकोटाले यस्तो साहित्यको सिर्जना गरेर हामीलाई दिएर गएका छन् कि जुन कालजयी छन्, सयौं वर्ष पनि पुरानो हुदैनन् र सदैव नागरिकलाई प्रेरणा भरिरहन्छन् । तिनै विशिष्ट साहित्यकारको जीवन र साहित्यका बारेमा केही महत्वपूर्ण सूचनाहरु जम्मा साहित्यकार नरेन्द्रराज प्रसाइँले हामीलाई दिनुभएको छ । जसलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ-
• लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म १९६६ साल कात्तिक २७ गते शुक्रबार काठमाडौंको डिल्लीबजारमा
• तिलमाधव देवकोटा र अमरराज्यलक्ष्मीका छ भाइ छोराहरूमध्ये लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा साइँला
छोरा थिए ।
• देवकोटाले दस वर्ष नपुगी कविता लेखेका थिए । त्यति बेला आफ्नी जेठी भाउजू सोमकुमारीलाई
सौता हालेपछि त्यही व्यथामा डुबेर ;म त अभागी पो भएँ शिर्षकमा उनले कविता लेखे ।
• देवकोटाको पढाइ राम्रो भएकाले उनले दरबार स्कुलमा आठौँ कक्षाबाट एक्कैचोटि दसौँ कक्षा
पढेका थिए ।
• देवकोटाले आइएस्सी पढ्दा लेखेको ;वसन्तषोडसी; शीर्षकको कविता;लक्ष्मी, टीसी कलेज, नेपालका
नाऊँबाट गोरखापत्र साप्ताहिकमा छापिएको थियो ।
• देवकोटाले प्राइवेट परीक्षार्थीका रुपमा पटना विश्वविद्यालयबाट बीए पढे र त्यहीबाटै बीएल पनि
पास गरे ।
• देवकोटाले लेखेका बेला उनी आफ्नै पाण्डुलिपि बालेर चुरोट सल्काएको र त्यसैले सिँगान पुछेको
पनि चाल पाउँदैन थिए ।
• देवकोटा जुवातास र पासामा पनि पारङ्गत थिए । साथै उनी गीत गाउँथे, हार्मोनियम र तबला
पनि बजाउँथे ।
• देवकोटालाई २००४ सालमा वनारसबाट प्रकाशित हुने ;उदयमा ईश्वर बरालले ;महाकविको
उपाधि लेखेपछि उनलाई महाकवि भन्न र लेख्न थालियो । त्यसभन्दाअघि उनलई युगकवि
• देवकोटा महाकविमा प्रसिद्ध भएपछि सिद्धिचरण श्रेष्ठले देवकोटासँग;युगकवि;को उपाधि
मागेर २०१२ सालमा आफ्नो नाउँअघि युगकवि लेखे; अनि उनी पनि युगकविमा नै चर्चित भए ।
• देवकोटाले त्रिचन्द्र कलेजमा प्रोफेसरको जागिर पाए । बीए पास भएर प्रोफेसर हुने उनी प्रथम
नेपाली थिए ।
• देवकोटा गरीव थिएनन् तर अति अव्यवहारिक थिए । हातमा पैसा परेपछि कसरी फुर्मास् गर्ने
भन्ने सोचमा उनी केन्द्रित हुन्थे । अनि जताबाट भए पनि उनी पैसा मास्नेतिरै उन्मुख हुन्थे र
भोलिपल्टदेखि भोकै पनि सुत्थे । यसको मुख्य कारण के हो भने- मनदेवीले धर्मका नाउँमा पैसा
उडाउन थालेपछि देवकोटाले पनि घरमा पैसा ल्याउन चाहँदैन थिए ।
• पागलखानाको उपचारका क्रममा देवकोटालाई डा.बर्कले हिलले भनेका थिए, ;देवकोटाजस्तो मान्छे
नेपालमा जन्मनु भौगोलिक गल्ती हो ।
• देवकोटाले २०१० सालमा रूमानिया जाँदा सिरक, डस्ना र सिरानी नेपालबाटै लगेका थिए । उनी
जहाजबाट ओर्लेपछि आफ्नो बेडिङ आफै बोकेर हिड्थे । त्यतिबेलाको त्यो दृश्य धेरैलाई रमिता
• देवकोटा २०१० सालमा चीन गए । त्यसबेला अध्यक्ष माओ त्सेतुङसँग उनले हात मिलाएका
• देवकोटाले चीनबाट फर्केपछि चीन र माओको धेरै व्याख्या गरे । त्यसबारे उनले दुईटा कविता
पनि लेखे । त्यसपछि उनलाई कम्युनिष्टको आरोप लगाएर काङ्ग्रेसले धेरै दुक्ख दिन थाले । तर
उनलाई राजा महेन्द्र र गणेशमान सिंहले काखी चेपेका थिए । गणेशमान सिहंले त देवकोटाको
खुट्टा नै ढोग्थे ।
• देवकोटाले महापण्डित राहुल साङ्कृत्यानका कारणले;पागल; लेखे र त्यस कविताको प्रथम पाठक
जनकलाल शर्मा थिए । पागल कविता वाचनकै क्रममा देवकोटाले झन्नै जनकलाल शर्मालाई
कुटेका थिए ।
• देवकोटालाई पागल सम्झेर मदन पुरस्कार (त्यस पुरस्कारलाई म बक्सिस् भन्छु) दिइएन ।
खास कुरा के थियो भने रानी जगदम्बाले देवकोटालाई पुरस्कारका साथै थप नगद र जिन्सी
दिन्छिन् भन्ने डरले उनलाई जगदम्बाको आँखाबाट ओझेल पारिएको थियो ।
• देवकोटा अति नै लोकप्रिय भएपछि मदन पुरस्कार गुठीका अध्यक्ष (रानी जगदम्बाका तत्कालीन
निजीसचिव) कमल दीक्षितले देवकोटाको स्तुति गरेर २०६६ सालमा;गुरूभेटी भन्ने किताप लेखे-
२००४ सालमा वनारसमा देवकोटाले भिख माग्दा मैले पनि एक रूपियाँ चन्दा दिएको थिएँ; भन्ने
उक्त कितापको मुल मन्त्र देखियो । त्यसै सन्दर्भमा मैले (नरेन्द्रराज प्रसाईले) त्यस बेहोराको
कठोर आलोचना गरेर दीक्षितकै सम्पादनमा मदन पुरस्कार गुठीबाट प्रकाशित ;नेपाली; त्रैमासिक
२०६६ सालमा एउटा लेख छपाएको थिएँ ।
• देवकोटालाई २००४ साल साउन ३ गते काङ्ग्रेसहरूले ठूलै आश्वाशन दिलाएर बनारस पुर्याए ।
केही दिनपछि उनले त्यहाँ भिख मागेर खान थाले । उनी त्यहाँ टिक्नै नसकेर काङ्ग्रेसलाई सराप्तै
नेपाल फर्के ।
• देवकोटा २००९ साल वैशाख १ गते राजा त्रिभुवनबाट सांसद भए । त्यसपछि पनि राजा महेन्द्रले
उनलाई माननीय सांसदमा मनोनीत गरेका थिए ।
• २०१३ सालमा भारतमा सम्पन्न अफ्रोएशियाली लेखक सम्मेलनमा भाग लिने देवकोटा पहिलो
नेपाली थिए । त्यसबेला उनको केहीले अपमान गरे तापनि सबैभन्दा धेरै मान उनैको गरिएको
थियो । ;धर्मयुग;जस्तो सुप्रसिद्ध र विशिष्ट हिन्दी पत्रिकाले समेत देवकोटाको फोटो आवरणमा
राखेर जय मनाएको थियो ।
• २०१५ सालमा अफ्रोएशियाली सम्मेलन सोभियतसङ्घको तासकन्दमा भएको थियो र त्यहाँ जाने
पनि देवकोटा पहिलो नेपाली थिए । त्यसबेला उनको भाषण संसार प्रसिद्ध भयो ।
• देवकोटाले नै नेपाली भाषालाई सर्वप्रथम अङ्ग्रेजी साहित्यका माध्यमले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा
पुर्याएका थिए । उनी नेपाली, अङ्ग्रेजी, नेवारी लगायत चौध भाषा बुझ्थे । उनीद्वारा नौ भाषामा
लेखिएका कविताहरू शारदामा छापिएको थियो ।
• देवकोटा २०१४ साल साउन ११ गतेदेखि ११० दिनसम्म मन्त्री भएका थिए । त्यसैबेला नेपाल
राष्ट्रभरिका स्कुल र कलेजहरूमा नेपाली भाषामा पढाइ हुने व्यवस्था मिलाएका थिए ।
• देवकोटाले मन्त्री भएका बेला उनका समकक्षी मन्त्री जनरल भूपालमानसिंह कार्कीको समेत साथ
पाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि कीर्तिपुरमा पाँच हजार रोपनी जग्गा अधिकरण गरेका
• देवकोटा मन्त्री भएका दिन उनलाई निवासबाट मन्त्रालय पुर्याउने काम शताब्दी पुरुष डा.
• देवकोटा केटी प्रिय थिए । उनले केहीसँग मन जोडे र केहीसँग तन पनि जोडे । उनले सोभियत
रूस, भारतको पटना र दार्जिलिङ अनि काठमाडौंका केही केटीसँग माया साटासाट गरेका थिए ।
• देवकोटाले;मुनामदन; खण्डकाव्य ८ घन्टामा लेखेका थिए ।
• देवकोटाले १० दिनमा;सुलोचनाt; महाकाव्य लेखे । उनले भने;सुलोचना; लेख्न मलाई ६० घन्टा
लागेको थियो ।
• देवकोटाले खण्डकाव्य र काव्य ३६ वटा, महाकाव्य ६ वटा, कवितासङ्ग्रह २१ वटा र नाटक,
निबन्ध प्रबन्ध, कथा, उपन्यास, समालोचना आदि लेखे । साथै उनले केही किताप अनुवाद पनि
• देवकोटा एउटा खसीको टाउको खाएर एकै रातमा एउटा खण्डकाव्य लेख्न सक्थे । २००३ साल
पुस २४ गतेको कुरा हो उनले खसीको टाउको खाएर एकै रातमा तुषार वणर्न’ लेखेका थिए ।
• देवकोटाले ;उद्धेश्य के लिनु ? उडी छुनु चन्द्र एक; लेखे । त्यो लेख्ता धेरैले देवकोटा पागलै हुन्
भनेका थिए; तर उनी स्वर्गीय हुनु पाँच घण्टाअघि उनकी प्रिय स्रष्टा डा.आगानीनाकै देश अर्थात्
रूसको यानले चन्द्रमामा खुट्टा टेकेको थियो ।
• देवकोटा २०१६ साल भदौ २९ गते सोमबार साँझको ६ बजेर १० मिनेटमा क्यान्सरका कारणले
दिवङ्गत भए ।
# नरेन्द्रराज प्रसाई # महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा # देवकोटा ११२औँ जन्मजयन्ती
प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७७, १२:२२:१७